iPadOS 15 wuxuu soo dhaweynayaa waxqabadka badan iyo maktabada App | Wararka IPhone
Waxay ahayd sir qarsoon. iPadOS 15 ayaa bilaabay in lagu soo bandhigo WWDC 2021 waxayna Apple ku dhawaaqday qaab cusub oo ay ku daawato codsiyada Maktabadda App. Intaas waxaa sii dheer, imaatinka shaqadan, sidaas oo kale ayaa la sameeyaa widgetyada shaashadda guriga sida wixii horeyba uga jiray iPhones-ka oo leh iOS 14. Ugu dambeyn, fikradda isku-xirnaanta badan iyo 'Split View iyo Split Over workflows' ayaa sidoo kale la siiyay soo celin, jidaynayey in la hagaajiyo wax soo saarka ee iPadOS 15.
App Library, Shaqooyin badan iyo Widgets-ka iPadOS 15
iPadOS 15 ayaa markii ugu horreysay shaashadda guriga ka soo muuqan doonta. Waxay isugu jiraan sidan widgets-yada aan horey ugu haysannay iPhone-ka oo leh iOS 14. Intaa waxaa dheer, hadda waxaan sidoo kale haysannaa App Library oo la heli karo, oo ah barnaamij bilaabaya dhammaan barnaamijyada si aanan u lumin faahfaahinta waxa aan ku haysanno aaladdayada. Waxaa cad in loo habeeyay interface-ka iPad-ka. Aalado waaweyn ayaa u yimaada iPadOS 15 si ay shaqsiyan ugu shaashadaan shaashadaha guriga, iyagoo mar labaad soo bandhigaya dhadhanka isticmaalaha.
Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa a shaqooyin badan oo dib loo naqshadeeyay. Split View waxay noqotey mid xariif ah hada waxaan furi karnaa app qaabka loo yaqaan Split View iyo xulashada barnaamijka xiga ee ku furmi doona shaashadda labalaabka ah, waxaa laga saari doonaa shaashadda. Markaad furto, waxaad la macaamili kartaa labada barnaamij adigoo soo bandhigaya waxyaabaha ku jira 'Split over' isla markaana soo bandhiga haddii aan hadhow rabno kuwa waaweyn.
Qulqulka shaqooyinkani waa isku day-laakiin waa hubaal inay horumar u tahay iPadOS 15.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » iPadOS 15 waxay soo dhaweynaysaa Multitasking iyo App Library